आहा ! पोखरा
Friday,29 May, 2020 | १६ जेठ २०७७
नरहरि पौड्याल पोखरा, २२ भदौ
तत्कालीन नेकपा माओवादीले शुरु गरेको शसस्त्र द्वन्दको अन्त्यसँगै भूकम्प र नाकाबन्दीले लामो समयसम्म थला परेकोे पोखराको पर्यटन व्यवसाय सुधार हुन थालेको छ ।
मुलुकमा जारी एकदशक लामो शसस्त्र युद्धको अन्त्यसँगै बिस्तारै तंग्रिन थालेको पर्यटन व्यसायमा २०७२ को बिनाशकारी भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीले नाजुक अवस्थामा पुग्यो । यतिवेला भने पोखराको पर्यटन व्यवसायले बिस्तारै गति लिन थालेको छ ।
पोखरेलीले आन्तरिक र बाह्य पर्यटक बोलाए । कहिले चीन त कहिले भारतीय पत्रकारसमेत ल्याएर व्यवसायीले पोखरा सुरक्षित भएको प्रचारप्रसार गरे ।
ब्यवसायीले छिमेकी राष्ट्र भारतका विभिन्न स्थानहरुमा पुगेर नेपालको पर्यटकीय स्थलहरु सुरक्षित रहेको सन्देश प्रवाह गर्दै अन्तरक्रिया समेत गरे ।
उनीहरुले अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा सूचना प्रवाहदेखि आन्तरिक पर्यटक प्रवद्र्धन गर्न सडक महोत्सव, चलिए पोखरा अभियान, फेवा महोत्सव लगायतका कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरे । त्यसपछि लामो समय शिथिल बनेको पर्यटन व्यवसायले बिस्तारै गतिलिन थाल्यो ।
पछिल्ला दिन पर्यटक आगमनमा उल्लेख्य सुधार आएको पोखरा पर्यटन परिषद्का पूर्व अध्यक्ष सोम थापा बताउँछन् । ‘भूकम्प र नाकाबन्दीपछिको केही समय शून्यप्राय भएको पर्यटन व्यवसायमा पछिल्लो समयमा भने उल्लेख्य सुधार भएको छ तर पर्यटकको संख्यात्मक वृद्धिको अनुपातमा व्यवसायमा गुणात्मक सुधार भने आउन सकेको छैन,’ उनी भन्छन् ।
भूकम्प र नाकाबन्दीपछि अन्तराष्ट्रिय बजारमा नेपालको वारे फैलएिको नकारात्मक हल्ल्काका कारण लामो समयसम्म पनि बाह्य पर्यटक आगमन ठप्प भयो । बिस्तारै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमनले थलापरेको ब्यवसायले गतिलिन थालेको थापा बताउँछन् ।
उनका अनुसार अहिले विभिन्न स्थानहरुमा सञ्चालनमा आएका होमस्टे र ट्रेकिङ जाने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरुको संख्यामा निकै बृद्धि भएको छ । नयाँ शैक्षिक सत्र र चाडपर्वको बिदामा हुने भ्रमणले आन्तरिक पर्यटक बढेको थापाको अनुभव छ ।
विशेषगरी पोखराको पर्यटकीय चहलपहल हुने समय असोज, कात्तिक र मंसिर तथा फागुन, चैत र वैशाख महिना हुन् । यो अवधिमा पोखराका पर्यटकीय स्थलहरुमा पर्यटकको घुइँचो नै लाग्ने गर्छ ।
कात्तिक र मंसिर महिनामा दशै तिहार जस्ता महत्वपूर्ण चाड पर्व पर्ने भएका कारण लामो समयसम्म कार्यालय र स्कूल बन्द रहने हुदा आन्तरिक पर्यटकको बाक्लो उपस्थिति हुने गर्छ ।
नेपालमा पछिल्लो समयमा विकास भएको घुम्ने संस्कृति र खर्च गर्ने प्रवृत्तिले लामो समय सम्म बाह्य पर्यटक ठप्प हुदा समेत पोखराको पर्यटन व्यवसायलाई आन्तरिक पर्यटनले धानेको नेपाल पर्यटन परिषद्का सदस्य एवं पर्यटन व्यवसायी वासु त्रिपाठी बताउँछन् ।
भूकम्पले पोखराका पर्यटकीय स्थल तथा भौतिक संरचनामा खासै क्षति नगरेपनि समग्र नेपालनै क्षति भएको गलत सन्देश अन्तराष्ट्रियमा प्रवाह भएका कारण त्यसको प्रत्यक्ष मार समग्र पर्यटन ब्यवसायीले भोग्नुपरेको त्रिपाठीको अनुभव छ ।
भूकम्प र नाकावन्दीको प्रभाव
पोखरामा भारतमात्र होइन युरोप, अमेरिकालगायत र बिश्वका विभिन्न मुलुकबाट समेत पर्यटक आउने क्रम बढेको पोखरा पर्यटन परिषदका निवर्तमान अध्यक्ष विकल तुलाचन बताउँछन् ।
निवर्तमान अध्यक्ष तुलाचनका अनुसार पर्यटकमध्ये सवैभन्दा बढी खर्च गर्नेमा चिनियाँ पर्यटक पर्छन् । तर तातोपानी नाका सञ्चालनमा नआएका कारण स्थलमार्ग मार्फत नेपाल भ्रमणमा आउने चिनियाँ पर्यटकको संख्या भने घटेको पर्यटन व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
सरकारले सन् २०२० मा नेपालमा २० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ भने गण्डकी प्रदेश सरकारले सन् २०१९ लाई आन्तरिक भ्रमण वर्षको रूपमा मनाउने घोषणा गरिसकेको छ ।
प्रदेश सरकारले आन्तरिक भ्रमण वर्षको अवसर पारेर प्रदेश अन्तरगतका विभिन्न जिल्लाहरुमा १ सय थप नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको समेत घोषणा गरेको छ ।
स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्दनमा देखाएको सक्रियताले यति खेर पर्यटन व्यवसायी उत्साहित छन् ।
गन्तव्य सूचिले उत्साह
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाले नेपाललाई विश्वका उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यको सूचीमा राखेका कारण पनि पोखराको पर्यटन व्यवसायले गतिलिन थालेको हो । यसवर्ष कास्कीकै घान्द्रुक विश्व गन्तव्य सूचीमा सूचिकृत भएको छ ।
यहाँ पदयात्रा, पर्वतारोहण, प्याराग्लाइडिङ, जलयात्रा र साहसिक यात्रा एवं प्राकृतिक दृश्यावलोकनलाई लक्षित गरी विश्वका विकसित मुलुकबाट पर्यटक आउने गर्छन् । विश्वका विभिन्न देशबाट पोखरा आएका पर्यटक मध्ये धेरैको रोजाइमा अन्नपूर्ण पदयात्रा पर्ने गरेको छ ।
अन्नपूर्ण पदयात्राको मुख्य प्रवेशद्वार लमजुङको सदरमुकाम बेँसीसहर, गोरखा र कास्की समेटिएको छ । पर्यटक बेँसीसहर हुँदै ५ हजार ४ सय १६ मिटर उचाइको अग्लो थोराङ्लापास भञ्ज्याङ हुँदै मुक्तिनाथ, जोमसोम पुगेर पोखरा फर्कने गर्छन् । यसको प्रर्वद्धन पर्यटन ब्यवसायी, टे«किङ गाईड र टे«किङ ब्यवसायीले गर्दै आएकाछन् ।
पोखरा हुँदै वीरेठाँटी, घान्द्रुक, घोरपानी हुँदै जोमसोम, मुक्तिनाथ र माथिल्लो मुस्ताङ पार गरी मनाङ हुँदै बेँसीसहरबाट फर्कने अर्को पदमार्गका कारणपनि पोखराको पर्यटन व्यवसाय मजवुद बन्दै गएको छ ।
पछिल्लो समय पदयात्रा, दृश्यावलोकन एवं साहसिक पर्यटनलाई लक्षित गरी पोखरा आउने पर्यटकको संख्या बढ्न थालेसँगै पर्यटन व्यवसायमा उत्साह थपिएको छ ।
स्तरीय होटल बनाउने होड
पर्यटन क्षेत्रलाइ लक्षित गर्दै पोखरामा ठूला र स्तरीय होटल र पर्यटन पूर्वाधार निर्माणले गति लिएको छ । राष्ट्रिय महत्वको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल निर्माण थालिएको १५ महिनामा नै ३० प्रतिशत भन्दा बढी काम सम्पन्न भएको छ। यो सन्देशका कारणपनि पोखरामा पर्यटन व्यवसायले गति लिन थालेको हो ।
असहज अवस्थाकोबीचमा पनि गत बर्ष पोखरामा करिव एक दर्जन होटल सञ्चालनमा आएका छन् । सराङकोटमा कर्ण शाक्यको हिमालय फ्रन्ट रिसोर्ट, हलनचोकमा होटल गुडवील, जलमाजल, पुम्दीभुम्दीमा दी प्याभिलियन हिमालयज रिसोर्ट, रुपाकोट रिसोर्टलगायत गतवर्षबाट सञ्चालनमा आएका हुन् ।
हिमालय फ्रन्ट रिसोर्ट, दी प्याभिलियन हिमालयज र रुपकोट रिसोर्ट खर्चालु पर्यटकलाई लक्षित गरी सञ्चालनमा ल्याइएको हो । एकदर्जन भन्दा बढी निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका होटल भने यसै वर्षबाट सञ्चालनमा आउदैछन् ।
पोखरा भ्यालीबाहिर पनि होटलहरु निर्माण गर्ने क्रम बढेको छ । पोखरा भ्यालीमा प¥र्याप्त जग्गाको अभाव र महंगो भएका कारण नयाँ लगानीकर्ताको आकर्षण भ्यालीका डाँडाकाँडातिर देखिएको छ ।
डाँडाकाँडा दृश्यावलोकनका लागि उत्तम हुने हुँदा पर्यटक समेत त्यस्ता ठाउँमा बस्न रुचाउँछन् । सराङकोट डाँडामा दुईवटा तारे होटल बनिसकेका छन् । केही निर्माणको चरणमा छन् ।
पोखराँंग नजिक रहेको मट्टीखानमा समेत युवा ब्यवसायीहरुको लगानीमा रिसार्ट सञ्चालनमा आइसकेको छ । अहिले पोखरामा ४ सय पर्यटकस्तरीय होटलहरु सञ्चालनमा रहेको पश्चिमाञ्चल होटल संघ पोखराका पूर्व अध्यक्ष भरत पराजुलीले बताए ।
यी होटलमा करिव ९ हजार रुम छन् । अहिलेसम्म यहाँका होटलमा २० हजार पाहुना अटाउन सक्ने क्षमता रहेको अध्यक्ष पराजुलीले बताए ।
पोखराबाट मनोरम हिमश्रृङ्खला देख्न पाइनुको साथै फेवाताल, बेगनास ताल, रुपाताल सहितका रामसारमा समेत सूचीकृत ९ वटै ताल यहाँको महत्वपूर्ण पर्यटकीय आकर्षणका रुपमा रहेका छन् ।
सराङ्कोट, महेन्द्र गुफा, चमेरे गुफा, पातले छाँगो, विन्दवासिनी मन्दिर, भद्रकाली मन्दिर, गुप्तेश्वर महादेव गुफा, पोखराको गर्भभित्र गहिरिएर बगेको सेती नदीका गल्छी, विश्व शान्ति स्तुपा आदि यहाँका आकर्षक पर्यटकीय स्थल हुन् ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ २३, २०७६, ०२:०३:००
म्याग्दीमा पहिलो पटक १ जनामा कोरोना संक्रमण
निर्मला मृत्यु प्रकरणः दोषीलाई कारवाही गर्न महिला संघको माग
कर्मचारी र विलासिताका क्षेत्र कटौती गरिनु सकारात्मकः पूर्वमन्त्री बाँस्काेटा
स्याङ्जाकी कोरोना संक्रमित महिलालाई उपचारका लागि पोखरा ल्याइयो
बागलुङमा भारतबाट फर्किएका ६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
स्याङ्जाको क्वारेन्टाइनमा रहेका २ युवामा कोरोना संक्रमण
याे बजेटले वर्तमान समस्या समाधान गर्दैनः बाबुराम भट्टराई
निम्न वर्गलाई राहत दिने गरी बजेट आयोः अध्यक्ष प्रचण्ड
कोरोना संक्रमणबाट अर्घाखाँचीका १ युवकको मृत्यु
पश्चिमी नाका गड्डाचौकीमा फहराइयो नेपालको झण्डा
कोरोना जितेर घर फर्किए पत्रकार रमण
बढुवा भएका ६० डीएसपीको पदस्थापन
कोरोनाको हाउगुजी देखाएर डब्लूएचओको लकडाउन व्यापार
कोरोना अब शायद जाँदैन, त्रासलाई भगाऔँ !
सीमामा प्रहरी ज्यादती: रात बिताउने शर्तमा सिमाना कटाइयाे
राजाको फोटोले किन दुख्यो गभर्नरको टाउको ?
मर्स्याङ्दी नदीबाट बालुवा तस्करी रोक्दा प्रहरी निरीक्षकको सरुवा
वैज्ञानिक भन्छन्, कोरोना रोक्न लकडाउनको निर्णय गलत, मृत्युदर झनै बढ्यो’